सम्धीलाई ७ पटक सम्म मिल्ने, कुलमानलाई दुई पटक पनि नमिल्ने ? सहमत हुनेले सेयर गरौ — newsparda.com
सम्धीलाई ७ पटक सम्म मिल्ने, कुलमानलाई दुई पटक पनि नमिल्ने ? सहमत हुनेले सेयर गरौ
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको तर्फबाट सांसद रहेकी सांसद गङ्गा चौधरी सत्गौवाले १८ घण्टासम्म बढेको लोडसेडिङ हटाउन भूमिका खेलका कुलमान घिसिङको कार्यकाल दोहोेर्याउनुपर्ने बताएकी छन्।
विभिन्न पदमा पटक-पटक नियुक्त दिने गरिएकोमा कुलमानलाई भने किन नमिल्ने भनेर उनले प्रश्न गरेकी छन्।अरुलाई निरन्तरता दिन मिल्छ भने कुलमानलाई पनि दिनुपर्छ। सम्धीहरुलाई निरन्तरता दिन मिल्छ भने कुलमानलाई मिल्दैन। १८ घण्टासम्म बढेको लोडसेडिङका कारण अँध्यारोमा बस्न बाध्य नेपालीलाई उज्यालोतर्फ डोहोर्याउने उनलाई निरन्तरता दिँदा के फरक पर्छ ?उनले भनिन्।